Fambolena any Alaotra: tanimbary 150 000 ha tototra noho ny fihotsahan’ny sahandriaka | NewsMada
Fambolena any Alaotra: tanimbary 150 000 ha tototra noho ny fihotsahan’ny sahandriaka
Tsy maintsy hiandry vola trosaina avy amina tetikasa hatrany ve ny fikojakojana ireo fotodrafitrasa ho an’ny fambolena? Tohodrano 10 any ho any sisa izao miantoka ny fambolena any amin’ny faritra Alaotra, malaza fa hoe sompitry ny vary voalohany eto amin’ny Nosy. Mihotsaka ireo sahandriaka, miteraka antsanga manototra tanimbary 150 000 ha, mihena isan-taona. Ny ao amin’ny tohodranon’i Sahamaloto Amparafaravola, ohatra, kely sisa ny habetsahan-drano voatahiry. Tolokevitra iray nisy nandroso ny fanadiovana io tohodrano io, manala ny fako sy ny fotaka ao anatiny. Toy izany avokoa ny hita any amin’ireo tohodrano hafa.
Tsy mahasakana fitohizan’ny fahatotoran’ny farihy raha hasiana tohana any amin’ny toerana ifandraisany amin’ny renirano, ohatra, i Maningory. Hatreto, tsy mbola hita misongadina ny vokatry ny ezaka BVPI, natao hiaro ny sahandriaka tsy hihotsaka.
Olana iray hafa koa ny miseho ao amin’ny tohodranon’i Bevava-Ilafy ao amin’ny PC.15 Vallée Marianina; ankehitriny. “Tsy mety misokatra ny lalana ivoahan’ny rano. Tapaka sy arafesina ny vy mampakatra rano”, hoy Rakotoarisoa Fidy Malala, filohan’ny Federasion’ny mpamboly manana velaran-tany iraisana 3 700 ha. Tamin’ny 1958 no vita io fotodrafitrasa io, saingy tsy hitan’ny tetibolan’ny minisiteran’ny Fambolena ny fikojakojana izany sy ny mitovy aminy.
Amin’izao fahavoazana izao, efa nandefa teknisianina avy amin’ny Genie rural niezaka namoha ilay hidin-drano ny avy amin’ny minisitera, saingy tsy voavaha ny olana hatramin’izao. Ny rotsak’orana anefa, tsy ampy, hatreto, ho an’ny fanetsana. Tsy misy lanjany ny teknikam-pambolena raha tsy misy aloha ny rano.